Mbola tsy nisy ohatra ity: sahan-drongony midadasika…145 ha saron’ny zandary | NewsMada
Raha atambatra, mirefy 145 ha be izao ny sahan-drongony saron’ny zandary tao amin’ny kaominina Itampolo, distrikan’Ampanihy andrefana, ny tapatapaky ny volana jolay teo. 25 ha tao amin’ny fkt Ampitanaky, 120 ha tao Ankamenaha I. Mbola tsy nisy ohatra ity…
Ataovy ny kajy! Efa indroa mahery mihoatra ny 67 ha raha atambatra ireto sahan-drongony saron’ny zandary tany amin’ny kaominina ambanivohitr’Itampolo, distrikan’Ampanihy Andrefana ireto. Voalohany tao Ampitanaky Itampolo, nandritra ny fisafoana nataon’ny zandary avy ao amin’ny vondron-tobim-paritra Ampanihy Andrefana no nahitan’izy ireo sahan-drongony midadasika 25 ha mihoatra tao amin’ny tanàna antsoina hoe Antsandoakiantitsy, fokontany Ampitanaky ao amin’ny kaominina ambanivohitr’Itampolo, distrikan’Ampanihy Andrefana. Rehefa nosavaina ny tranoheva manodidina dia mbola nahitana rongony 25 kitapo nefa tsy nisy olona na iray aza. Nanao ny tatitra avy hatrany ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena ka niroso tamin’ny fanapotehana ireo sahan-drongony sy nandoro ireo rongony 25 kitapo niaraka tamin’ny tompon’andraiki-panjakana any an-toerana ny zandary. Nampian’ny zandary avy ao amin’ny fari-piadidin’ny zandarimariam-pirenena ao Toliara. Noho ity saha ity midadasika loatra, tao anatin’ny herinandro be izao vao potika ireo volin-drongony tao amin’io saha io.
Mpamboly sy mpivarotra miisa efatra naiditra am-ponja…
Fa tohin’ny ezaka natao tamin’iny herinandro lasa teo iny, nihazo ny lemak’Ankililoaky, fokontany Ankamenaha I sy Ampinataky Atsimo, kaominina ambanivohitr’Itampolo, distrikan’Ampanihy indray ireo zandary nanadio ny faritra Atsimo Andrefana mikasika ireo voly rongony ihany. Tafakatra 120 ha (3 660 kg) ny tanimbolin-drongony hita sy nopotehina, rongony maina 36 gony (401 kg), voan-drongony famboly (150 kg) efatra gony, basim-borona tsy ara-dalàna iray no tratra ka nodoran’ny zandary tao Ejeda teo anatrehan’ny tonian’ny mpampanoa lalàna sy ny lehiben’ny distrikan’Ampanihy Andrefana. Mpamboly sy mpivarotra rongony miisa efatra no nosamborin’ny zandary ka naiditra am-ponja vonjimaika izay voarohirohy amin’ity raharaha ity. Fantatra, araka ny loharanom-baovao marim-pototra fa foto-piveloman’ny ao amin’ity kaominina ity ny voly rongony ary voalaza fa isan’ny tsara kalitao ny rongony avy any amin’iny faritra iny. Nentanin’ny zandary avokoa ireo fokonolona tany an-toerana namotika ny saha sy nitatitra ireo zava-mahadomelina hopotehina. Resy lahatra izy ireo fa hiaraka amin’ny mpitandro filaminana hamongotra sy hamotika ireo sahan-drongony ireo.